प्रधानमन्त्री बन्न किन ईच्छुक देखिएनन् सभापति देउवा ? - Meronews
प्रधानमन्त्री बन्न किन ईच्छुक देखिएनन् सभापति देउवा ?
मेरोन्यूज २०७७ चैत २८ गते १५:२४
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार कांग्रेस सहित तीन पार्टीको बैठक आफ्नो निवास बुढानिलकण्ठमा बोलाए । जसमा कांग्रेस,नेकपा(माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) तीन पार्टीको बैठक सभापति देउवाले आफ्नो निवास बुढानिलकण्ठमा बोलाएका हुन् ।
बैठकमा सहमति हुन सक्दैन भन्नेबारे पहिले नै जानकार रहेका उनले कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनका लागि पहल लिएको देखाउनका लागि मात्रै सो बैठक बोलाएका थिए । तीन दलको बैठक सकिएपछि उनि निकट नेताहरु मात्रै सम्मिलित बैठकमा देउवाले, ‘देख्नुभयो मैले जसपा हाम्रो नेतृत्वको सरकारमा आउँदैन, उसको ओलीसँग कुरा मिलिसकेको छ भन्दा पत्याउनुु हुन्न, अब छिटो निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन’ भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।
सो बैठकअघि शुक्रबार नै कांग्रेस निकट कर्मचारीहरुको राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरकार गठनका विषयमा देउवा र पौडेलबीच सार्वजनिक मञ्चमै भनाभन समेत भयो । बोल्ने क्रममा नेता पौडेलले साईत हेर्दा यस अघिनै एकपटक सरकार बन्ने अवसर गुमेको र फेरी पनि देउवाले अर्को अवसर गुमाउन लागेको बताएका थिए । जवाफमा देउवाले झेक्किँदै कहिले अवसर खेर फालेको भनेर बोलाएरै सोधेका थिए । जसले केहिबेर त्यहाँको माहोल नै गरम बनेको थियो ।
यसअघि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक चैत २० गते दिउँसो २ बजेका लागी बोलाईएको थियो । तर कांग्रेसले नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि पहल गर्ने कि नगर्नेबारे निर्णय गर्नेबारे शिर्ष नेताहरुको अनौपचारिक बैठकमा मत बाँझिँदा साँझ ७ बजेपछि मात्रै केन्द्रीय समितिको बैठक बसी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यो निर्णयमा सहमति गर्न पाँच घण्टा बढी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नसक्नुको कारण नयाँ सरकार गठनबारे कांग्रेस पार्टी सभापति देउवाको अनिच्छानै मुख्य कारण थियो । देउवा तत्काल सरकारबारे कुनै निर्णय गर्न नहुने भनी बैठकमा अड्डि कसेका थिए ।
जसपाको भूमिका शंकास्पद रहेको तथा केपी पक्षमा रहेका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो सो पार्टीमा निर्णायक रहेको,माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिईसकेको अवस्थामा कांग्रेसले अहिलेनै निर्णय लिनु हतारो हुने भनाई बैठकमा देउवाले दोहर्‍याईरहे ।
छलफलमा नेता रामचन्द्र पौडेलले जसपाका नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई मिलाउने जिम्मा मेरो भो तर आजै निर्णय गरिहालौँ भन्ने प्रस्ताव गरेपछि मात्रै देउवा गलेका थिए । स्रोतका अनुसार काँग्रेस नेताहरुकै अगाडि पौडेलले राजपाका केही नेताहरूलाई फोन गरेर सरकारबारे कांग्रेसले निर्णय गर्न लागेको र त्यसमा साथ दिन आग्रह गरेका थिए ।
रामचन्द्र पौडेल पक्षधरको चर्को दवावपछि देउवा सरकारको राजिनामा माग गर्ने र कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन निर्णय गर्न बाध्य भए ।
सभापति देउवाले बाध्यताबीच गरेको सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफैले पहल लिने सम्भवना छैन ।
उनी निकट कांग्रेसका एक नेता भन्छन, ‘सभापतिजीको मुड हेर्दा अरुले नै वातावरण बनाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी अगाडी राखिदियो भने सो कुर्सीमा बस्लान् । आफै सो कुर्सीमा बस्ने वातावरण बनाउन पहल गर्ने सम्भावना न्युन देखिन्छ । ’
सभापति देउवाले पहल गर्ने हो भने उनी प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना देखिन्छ । तर मुखैमा आएको प्रधानमन्त्रीको पदमा देउवाले खासै रुचि देखाएका छैनन् । राजनीतिमा पदका लागि जे गर्न पनि पछि नपर्ने बिम्बनै बनाएका देउवाले यसपटक प्रधानमन्त्री बन्न चाँसो देखाईरहेका छैनन् ।
एमाले फुट्ने र जसपा पनि कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने तहमा पुगे मात्रै देउवाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन निर्णायक पहल लिने देखिन्छ । अन्यथा ‘अर्लि इलेक्सन’को वातावरण रहिरहेसम्म देउवाले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन निर्णायक पहल लिने सम्भावना न्युन रहेको छ । काँग्रेसमा अहिले बिँड(पोैडेल) तातेको हो, ताप्के(देउवा) तातेको होईन भन्ने देउवा निकटको ठहर छ ।
सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्री बन्न देउवाले ईच्छा नदेखाउनुको मुख्य चार देखिन्छन् । पहिलो आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष, दोस्रो जसपाको एजेण्डासँग उनको सम्बन्ध र तेस्रो भारतको ग्रिन सिग्नल नपाउनु र चौथो कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको उनको सम्बन्ध मुख्य हुन् ।
सभापति देउवाको भित्रि चाहना ‘अर्लि इलेक्सन’ नै हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेर प्रतिनिधिसभा भंग भई मंसिरमा निर्वाचन घोषणा हुँदामात्रै आफुलाई पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षमा फाईदा हुने देउवाको आँकलन छ । नेपाली कांग्रेसको भदौमा हुने महाधिवेशन सरोस् भन्ने चाहना राखेका देउवाले ‘अर्लि इलेक्सन’लाई नै बढी जोड गरेका छन् ।
मंसिरको निर्वाचनमा पार्टी सभापतिको रुपमा आफुले टिकट दिन पाउने र निर्वाचनपछि आफु संसदीय दलको नेतामा स्वभाविक रुपमा बहुमतमा पुग्ने उनको हिसाब छ । एमाले फुटको संघारमा रहेको, विप्लवको शान्तिपुर्ण राजनीतिमा आगमनसँगै माओवादी केन्द्रपनि कमजोर बन्ने अवस्थामा पुगेकाले काँग्रेसले स्वतः बहुमत प्राप्त गर्ने र पाँच वर्ष आफु ढुक्कले प्रधानमन्त्री बन्ने देउवाको दाउँ छ । विभिन्न सम्झौता गरेर अहिले एक/ डेढ वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीमा लोभ गर्नुभन्दा पाँच वर्षे प्रधानमन्त्रीमा ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने देउवाको निचोड छ ।
मंसिरमा निर्वाचन नभई आफु महाधिवेशनमा जानु परेमा देश र विदेशी शक्ति केन्द्र लागेर आफुलाई पार्टी सभापतिमा हराउने योजना बनेको उनलाई शंका छ । विशेषत नेता विमलेन्द्र निधिले पार्टीभित्र अध्यक्षको दावी गर्दै उम्मेदवारी दिने बताएपछि देउवा बढी नै झस्केका छन् । निधिले देशभरका आफ्ना कार्यकर्तालाई फोन गर्दै सभापतिमा सहयोगका लागि आग्रह गर्ने र अब देउवाको काम छैन भन्दै क्याम्पेनिङ गरिरहेकाले उनलाई सबैभन्दा बढी झस्काएको हो ।
देउवाका ‘किचन क्याविनेट’मा रहेका नेताहरुले निधि जित्न नभई हराउन मैदानमा आउन खोजिरहेको बताएपछि उनी झन बढी शंकित बनेका हुन् । मुख्यतः छिमेकी भारतले कांग्रेसमार्फत हिन्दु राज्यको एजेण्डा स्थापित गर्न खोजेकोमा देउवा बाधक बनिरहेका छन् । अमेरिका र युरोपियन युनियनका प्रिय रहेका देउवा उनिहरुको एजेण्डा विपरित हिन्दु राज्यको एजेण्डालाई बोकेर हिँड्न चाहेका छैनन् ।
दक्षिणले हिन्दु राज्यको लागि देउवालाई तिव्र दवाव दिईरहेको छ । देउवाले त्यो एजेण्डा स्वीकार नगरे कट्टर हिन्दुवादीको पहिचान बनाएका शेखर कोईराला वा अन्य कुनै नेतालाई कांग्रेस सभापतिमा स्थापित गर्ने दक्षिणको योजना रहेको देउवाको बुझाई छ ।
जसपा मुख्य माग रेशम चौधरीको रिहाई र सरकारमा सहज सहभागिता हो । तीन वर्ष बढी सरकारबाहिर रहँदा धेरै चिज गुमाएको महशुस गरेको जसपा रेशम चौधरीको रिहाइलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर सरकारमा जान खोजिरहेको छ ।
थारुहट आन्दोलनका नेता चौधरीलाई छाड्ने शर्तमा सरकारमा गए अखण्ड सुदुरपश्चिम पक्षधर पहाडे समुदाय भड्कने र सुदुरपश्चिम क्षेत्रमै कांग्रेसले चुनाव हार्ने डर देउवालाई छ । त्यसैले जसपाका नेता महन्थ ठाकुरले आफु निकटसँग रेशम चौधरीको नाम सुन्ने बित्तिकै देउवा ज्वरो आएकोजस्तो अनुहार बनाउने गरेको टिप्पणी गर्छन् ।
देउवाले जसपासँग गठबन्ध गर्न नचाहनुको अर्को कारण मधेसको भोट बैंक हो । विगतमा पहाडलाई कम्युनिष्टको भोट बैंक र तराई÷मधेसलाई कांग्रेसको भोट बैंकको रुपमा लिईन्थ्यो ।
तर मधेसवादी दलको उदयसँगै मधेसमा कांग्रेसको भोट बैंक नराम्ररी क्षति भयो । मध्य मधेसमा कांग्रेसलाई नै उछिन्ने गरी मधेसवादी दलको वर्चश्व स्थापित हुनपुग्योे । त्यसैले कांग्रेस सभापति देउवा मधेसवादी दलको रुपमा पहिचान बनाएको जसपालाई मधेसमा स्थापित हुनेगरी कुनै सम्झौता गर्ने मुडमा छैनन् । कम्युनिष्टहरु फुटेको अवस्थामा पहाडमा सहजै कांग्रेसले जित्ने र मधेसमा जसपालाई रोक्ने रणनीति देउवाले अंगिकार गरेका छन् ।
जसपाभित्र अहिले केपी ओलीको सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने धारको नेतृत्व महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले गरिरहेका छन् भने सोही पार्टीका नेताहरु डा.बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव भने काँग्रेस÷माओवादी गठबन्धनको सरकारका लागि वकालत गरिरहेका छन् । सरकारका कारण तिव्र असन्तुष्टिमा रहेको जसपा फुट्ने अवस्थाको सिर्जना भए त्यसले पनि सबैभन्दा बढी फाईदा कांग्रेसलाई नै हुने देउवाको आँकलन छ ।
भारतको ग्रिन सिग्नल नपाउनु
कांग्रेस सभापति देउवाले नयाँ सरकारका लागि निर्णायक पहल नलिनुको अर्को कारण दक्षिणी छिमेकी भारतको ग्रिन सिग्नल नपाउनु हो । उनले आफै र आफु निकट नेताहरु मार्फत पटक/ पटक दक्षिणको नाडी टाम्ने काम गरिरहेका छन् । बिगत तीन वर्षमा भूमिका बिहिनजस्तै देखिएको भारत नेकपा फुटसँगै फेरी नेपालमा निर्णायक शक्तिको रुपमा उदाएको देउवाले नबुझ्ने कुरै भएन । तर आफ्नो नेतृत्वको नयाँ सरकारका लागि दक्षिणबाट सकारात्मक जवाफ उनलाई आईसकेको छैन । दक्षिणबाट सकारात्मक जवाफ नआई उनि कुनै हतारो गर्ने पक्षमा छैनन् ।
गत बुधबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ओली सरकारले विदेशीशक्ति सामु आत्मसमर्पण गरेको भनि दिएको अभिव्यक्ति पनि अर्थपुर्ण रुपमा लिईएको छ । प्रचण्डले भारतलाई रिझाउन कम्फर्टेबल सरकार बनाउनेदेखी लोकतन्त्रका लागि भारतको सहयोगको अपेक्षा गरेको भनि बारम्बार अभिव्यक्ति दिएपनि भारतले त्यसलाई पत्याएन । भारतको सदासयता ओली सरकारलाई निरन्तर कायम रहेकै संकेत पाएपछि प्रचण्डले ओलीलाई विदेशीसामु आत्म समर्पण गरेको आरोपित गर्दै सो अभिव्यक्ति दिएको देउवाको समेत ठम्याई छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भएपनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हरेक निर्णयहरुमा देउवा प्रायः मौन जस्तै छन् । संसद विघटनजस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यको पनि उनले खुलेर बिरोध गरेनन् । अझ कतिपय अवस्थामा त ओलीले गरेका कामको समर्थन गर्न पनि देउवा पछि पर्दैनन् । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति होस् वा अन्य स्वार्थपुर्ण कार्यहोस् ओली–देउवाको कुरा मिलेको आभाष हुन्छ ।
कांग्रेसले नियुक्त गरेका राजदूतहरु फिर्ता गर्दा राजदुतको रुपमा जापानमा रहेकी देउवाको सासु प्रतिमा राणा फिर्ता भइनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जयबहादुर चन्दसम्मको नियुक्तिले ओली–देउवा घनिष्ठता प्रतिबिम्बित गर्छ ।
अहिलेपनि केपी ओलीले संसदको अंक गणित परिवर्तन गर्नुपर्छ त्यसका लागि निर्वाचन मात्रै एउटा उपाय हो भनिरहँदा ‘अर्लि इलेक्सन’मा यी दुईको कुरा मिलिसकेको आभाष हु्न्छ । जसपाले साथ दिईहाले पनि प्रधानमन्त्री ओली ‘अर्लि इलेक्सन’ मै जाने मुडमा छन् ।
आफुले यसअघि गरेको संसद विघटन जायज थियो भन्ने पुष्टि गर्नका लागि भएपनि ओली पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दा निर्वाचनमै जोड दिइरहेका छन् । यसरी छिटो निर्वाचन चाहेका देउवा र छिटो निर्वाचनको घोषणा यसअघिनै गरिसकेका ओलीबीच ‘अर्लि इलेक्सनमा ’मा थप एकमत बन्दै गएको देखिन्छ ।